पर्वत डेष्क – Nepali news portal
४ भाद्र २०७८, शुक्रबार १६:२७ August 20, 2021 पर्वत डेष्क
४ भदौ, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पदाधिकारीहरुले पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ समितिले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना […]
४ भाद्र २०७८, शुक्रबार १६:१५ August 20, 2021 पर्वत डेष्क
४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले नेकपा एमालेका १४ जना सांसदमाथि कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(२) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि निर्णय नभएको उनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा राख्दै डा. देवकोटाले दलीय […]
२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमाले समाजवादी दल दर्ताका लागि माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगतै एमाले फुटेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो संयोजकत्वमा एमाले समाजवादी दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । […]
१ भदौ, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी पर्सिदेखि सुरु गर्ने भनिएको आमरण अनशन स्थगित गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मंगलबार भेट भएपछि केसी तत्काल अनशन नबस्न सहमत भएका हुन् । उनले पर्सिदेखि बर्दिबासमा अनशन बस्ने तयारी गरेका थिए ।